Axmed Silaanyo oo la kulmay Ra’isul wasaaraha Britain – idalenews.com
Axmed Silaanyo oo la kulmay Ra’isul wasaaraha Britain
Madaxweynaha Maamulka Somaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo iyo Wafdi uu hogaaminaayey ayaa waxa ay ku sugan yihiin Magaaladda London ee Dalka UK.
Madaxweynaha iyo Wafdigiisa ayaa waxa ay la kulmeen Raisal wasaaraha Dalkaasi Ingiriiska David Cameron.
Kulankan oo ahaa mid ay ku lafa-gureen labada dal, wada shaqaynta iyo xiriirka Siyaasadeed ee ka dhexeeya, ayaa madaxweynaha Maamulka Somaliland oo kulankaasi ku dheeraday sidii loo ilaalin lahaa wada jirka iyo wada shaqaynta ee ka dhexeeyay Dalka Britain iyo Maamulka Somaliland iyo sidii laysaga kaashan lahaa xoojinta iyo adkaynta nabad-gelyada geeska afrika, hour-marka iyo dhaqaalaha.
Sidoo kale waxa uu Ra’isul wasaare David Camaron Madaxweynaha Maamulka Somaliland Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo) u soo bandhigay ahmiyada uu leeyahay Shirka London lagu qaban-doono ee Somalia iyo Maamulka Somaliland doonayo in lagu wada hadashiiyo oo uu ku nuux-nuuxsaday Ra’isal wasaaruhu in ay Somaliland faa’iido weyni ugu jirto ka soo qayb-galkaasi, ingiriiskana ay muhiim u tahay.
David Camaron, waxa uu Wakhti siiyay Wafdigii Maamulka Somaliland isagoona kuwar galiyay inay heystaan Fursadii ugu dambeysay hadii la waayo Natiijo waafi ah oo ay isla soo meel dhigaan Maamulka Somaliland uu mar ahaanba Shirka dhici doono isla markaana cidna loo hakin doonin, sida laga soo xigtay Warbaahinta London.
Midowga Yurub iyo Ethuiopia oo isku waafaqay Xal u raadinta Arrimaha Somalia
FBI oo qabatay nin lagu xiriirinayo inuu Madaxweyne Obama usoo diray Bashqad Sumeysan